Semalt: Indlela Yokuvimba Ugaxekile Ku-IIS
Ukugaxekile kogaxekile kube yisongo esivamile futhi esiyingozi ngenxa yokwanda kwamabhulogi amasha ezikhathini zamuva. Njengamazwana kanye ne-trackback ogaxekile, ugaxekile wokudlulisela uklanyelwe ukubeka izixhumanisi kusayithi elikhubazayo ngenhloso yokushayela ithrafikhi nokukhulisa injini yokusesha ithrafikhi. Ngokuvamile, ukuphawula kanye ne-trackback bots kungagcinwa ngokusebenzisa izindlela zokuqinisekisa abantu ezifana ne-kittenauth, i-captcha nezinsizakalo zokulonda ogaxekile kubandakanya i-Askimet.
Ngeshwa, i-spam yokudlulisela i-kettle ehlukile yezinhlanzi ngokuphelele. Lokhu kungenxa yokuthi ayifuni ukuthumela izixhumanisi kuwebhusayithi ngqo. Esikhundleni salokho, i-bot ixhomeke kubakhulogi abathanda ukuthumela izibalo kumasayithi abo mayelana nokuthi ithrafikhi yabo ivela kuphi eyaziwa ngokuthi umthumeli. Lezi zigaxekile zithinta iwebhusayithi yakho nge-referrer ekhohlisayo ebuyela emuva kusayithi lakho. Ngokungazelelwe, abanikazi beblogi baqala ukuqaphela izibalo ezibukwayo ezibukhoma eziboniswa kumasayithi abo nezixhumanisi kumawebhusayithi angaziwa. I-bot yenza lokhu ngokuphindaphindiwe, futhi uma kungenakwenziwa, amabhuthi angathatha inani elikhulu lemithombo yamandla omgwaqo okuholela ekunqatsheni inkonzo (DOS).
Uchwepheshe kaMichael Brown, u-14 (Semalt , uthi, uma kwenzeka kwenzeka, i-bots izothuthukisa izingodo zakho ngedatha elingenalutho, ikushiye ngaphandle komqondo lapho ukuhamba kwakho kuvela khona. Uma ngabe ushaywa yizi bots, nansi indlela yokuvimbela ugaxekile ku:
ISAPI Ukubhala kabusha
Ama-webmasters abanjwe yi-botsrerer bots bayamangala ukubona ukuthi bangakwazi ukugcina ama-bots ngokwenza izinguquko emigqeni emibili phezulu kwefayela le-ISAPI Rewrite httpd.ini. Ukwenza lezi zinguquko zenze isheke elingenakuqhathaniswa nesithunyelwe kuzo zonke izimoto ezingenayo ngokumelene nohlu lwakho lwamabhunu owaziwa ngokudlulisela. Uma kutholakala umdlalo, akukho ukuqhutshwa okuqhubekayo futhi ikhasi elitholakali (404) lekhodi yephutha liyathunyelwa.
# Ukukhishwa kwe-Block SPAM
# Engeza amagama angukhiye phakathi kwe ngezansi futhi uhlukaniswe no |
I-RewriteCond Referer:. * (?: keywords | go | lapha). *
Bhala kabushaRule (. *) $ 1 [I, F].
Ukugcina ama-bots, gcwalisa amabakaki besebenzisa amagama angukhiye njengoba kuboniswe ngenhla kusuka kucingo lokudlulisela futhi uhlukanise lawa nesimboli sephayiphu. Uma i-bots ikushaya ekukhomba indawo 1.marine.com nakwebsite2.marine.com, vele ufake igama elingukhiye elwandle. Lokhu kuzovimbela noma yikuphi ukuzama kwamanje nokwasekusasa kusuka kumasayithi ngegama elithi elwandle ngokushaya isayithi lakho. Khumbula ukuthi i-ISAPI Rewrite ayifani umahluko phakathi kokudlulisela okuhle kokubi. Lokhu kusho ukuthi noma ngubani othumelela ngamagama afana nalokho owamisile uzovinjelwa ngisho noma kuyisitimela esisemthethweni.
Uma usubeke izihlungi endaweni, uzobona ushintsho kumalogi wakho wokudlulisela. Uma ama-bots esekushaya kanzima kakhulu, kuyoba nokunciphisa okukhulu ekusetshenzisweni kwemithombo yesistimu. Nakuba i-ISAPI ibhala kabusha ukugcina ibhotela yokudlulisela ingase ingabi yisisombululo esihle kunazo zonke kule nkinga, iphumelela kakhulu ekuyikhipheni.
Amabhubhu ahlala eguqukela
Ngaphambi kokuba uhlale futhi uphumule ngoba uye wakwazi ukuvimba ugaxekile ku-iis, khumbula ukuthi i-bots iyaqhubeka njalo. Ngokushesha noma kamuva bazokhipha izihlungi zakho zogaxekile. Ukuze uqhubeke phambili kwebhodi, qapha izingodo zakho zokudlulisela. Uma ubona noma yiziphi iziteshi zogaxekile zokuthunyelwa kuzo eziza phezulu, zengeze ohlwini lwakho Source .